लामो रिक्ततापछि ३ देशमा नयाँ राजदूत : भारत, मलेसिया र युएर्इका लागि काे परे ? - Kendra Khabar
लामो रिक्ततापछि ३ देशमा नयाँ राजदूत : भारत, मलेसिया र युएर्इका लागि काे परे ?
२०७५, २६ कार्तिक सोमबार ०४:५७
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिमा असफल रहेको आरोप लागिरहेको वर्तमान सरकारले लामो समयको रिक्ततापछि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतसहित बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुको मुख्य गन्तव्य मलेसिया र युएईमा पनि राजदूत नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । मन्त्रिपरिषदको अाइतबारको बैठकले राजदूत सिफारिस गरिएको भए पनि औपचारिक निर्णय भने सुनाइएको छैन ।
सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरेको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मलेसियाको लागि राजदूतमा उदयराज पाण्डे र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि राजदूतमा कृष्णप्रसाद ढकाललाई राजदूत नियुक्त गरेको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बैठकमा धेरै विषयमा छलफल भई आवश्यक निर्णयहरु गरिएको र त्यसबारेमा केही नयाँ प्रबन्धसहित जानकारी गराइने बताउनुभएको थियो । भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरिएका आचार्य नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध आयामहरुको पुनरावलोकन गर्न गठित प्रवुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।
आयार्च यसअघि श्रीलंकाका लागि राजदूत रहिसक्नुभएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको पहिलो सरकारमा उहाँ कानूनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यसअघि दीपकुमार उपाध्यायको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले भारतकालागि राजदूत नियुक्त गर्न सकेको थिएन ।